‘क्लासिक’ को फुर्ति – Sourya Online
‘क्लासिक’ को फुर्ति
सौर्य अनलाइन २०७२ मंसिर २८ गते १२:१७ मा प्रकाशित
काठमाडौं, २७ मंसिर । अभिनेता आर्यन सिग्देल र अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ फिल्म ‘क्लासिक’मा बग्न पाएकोमा खुसी देखिए । फिल्मको छायांकन सकिएको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा यो जोडी एक अर्काको कामको तारिफ गर्नमा व्यस्त देखियो । आर्यनको कामप्रतिको लगाव र सधंै सिक्न चाहने बानीबाट प्रभावित नम्रतालाई आर्यनले पनि उनको कामको तारिफ गर्दै फुर्काए ।
क्लासिक आफ्ना लागि विशेष फिल्म भएको आर्यनको भनाई थियो । उनले यो फिल्मको कथावस्तु लामो समयसम्म दर्शकले संझिरहने भएकाले पनि क्लासिक नाम राखिएको परिभाषा दिए । आर्यनले आफ“ भित्र क’नै पनि चरित्रलाई खोज्ने आफ्नो चाहना हुने बताए । उनले क्लासिकमा आफू र नम्रता दृष्टिबिहिनको भूमिकामा देखिएको जानकारी गराउँदै भूमिका च्यालेन्जिङ रहेको सुनाए ।
दिनेश राउतले निर्देशन गरेको यो फिल्मलाई आर्यनले निर्माता सुवास गिरीसँग मिलेर बनाएका हुन् । फिल्ममा आर्यन र नम्रताका अलवा रोमी घिमिरे, सुशिल काफ्ले, प्रज्वल गिरी लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ । दृष्टिबिहिनहरूको प्रेम कथामा आधारित यो फिल्म नोभेम्बर रेन भन्दा पनि उत्कृष्ट बनाउन खोजेको निर्देशक राउतको भनाई थियो । करिब ५० दिनमा फिल्मको छायांकन सकिएको छ । निर्माता गिरीले हलसम्म आइप’ग्दा फिल्मले ! करोड खर्च छ’ने बताए . उनले ! करोड लगानी भएपनि फिल्मको मेकिङबाट आफू हर्षित भएको सुनाए । गिरीले भने–‘हाम्रो टिम संधै उत्कृष्ट फिल्म पस्कन चाहन्छ । हामीले क्लासिकलाई त्यसरी नै प्रस्तुत गरेका छौँ ।’
माघ २९ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने यो फिल्ममा राजेश श्रेष्ठको छायांकन, ताराप्रकाश लिम्बुको संगीत, रेनशा राईको कोरियोग्राफी, छेतन गुरुङको कथा छ । प्रेम दिवसको समयमा दर्शक क्लासिकको प्रेम कथामा बग्न सक्ने आर्यन र नम्रताको विश्वास छ ।